Ramangwana remaWiricheya | Karman® Mawiricheya
Pamasikiro wiricheya yakave kuburikidza neshanduko zhinji pamusoro pemakore uye yakaramba ichichinja uye kuvandudza kusvika panguva ino. Ramangwana re wiricheya inonakidza uye yakazadzwa ne tekinoroji itsva iripo izvo zvicharamba zvichienderera kuvandudza hupenyu hwevanhu. Tekinoroji senge michina inogona kubatsira kuumba uye kupeta zvinhu kuita zvimiro zvakakwana ndiyo kiyi yekuvandudza mashandiro eiyo wiricheya. Zvinhu zvakasiyana zvakashandiswa nekufamba kwenguva zvakakanganisa kusimudzira kweiyo wiricheya kugadzirisa uye kuvandudza nyaya dzakasiyana dzehutano.
Kutsvagisa chave chimwe chinhu chakakosha mukusimudzira kweiyo mavhiripu nekuti rubatsiro rwayo rwunowedzera kushandiswa kwe wiricheya uye chinangwa chayo. Wiricheya pakutanga yakanga iine shoma basa. Inogona chete kushanda panzvimbo yakati sandara, asi ikozvino yave ne kugona kufamba pamusoro pezvakawanda nzvimbo. Izvi zvinopa vashandisi mukana wekufamba-famba zviri nyore. Makambani ekutsvagisa akadai se Karman Healthcare ave achikwanisa kunzwisisa vatengi vavo uye zvinopa yezvavanoda pamabasa avo ezuva nezuva. Kubudikidza nekutsvagisa, vanhu vakakwanisa kutora chikamu uye kuramba vachishinga mumitambo uye vachirarama vakagwinya uye anoshingaira mararamiro in mavhiripu. Vhiri racho ndechimwe chinhu chinovandudza icho inopa mawiricheya zvimwe chiitiko chakagadziriswa kune avo vashandisi. Yakagadzirwa kuti ive yakasimba kwazvo uye inotora iyo yakawanda yekukanganisa. Vanhu vava kukwanisa kusimuka kubva munzira dzemumigwagwa vasina kukuvadza furemu kana rim vhiri.
Wiricheya rave richishandiswa nechinangwa chakatarwa chekutenderera zvakadaro mune ramangwana mavhiripu vane zvishoma zvausingakwanise maererano nekufambira mberi kwenguva. Semuyenzaniso, ramp inofanirwa kugadzirwa kuitira kuti vanhu vari mu mavhiripu kuwana mukana kune zvivakwa zvine masitepisi. Pane mavhiripu kugadzirwa kutendera iyo wiricheya kuita kunge escalator inokwira kusvika pamatanho uye zviyero zvemunhu sezvaanenge achifambira nematanho.
Wiricheya ndakanga ndisina iyo simba kuenda pamusoro pezvakawanda nzvimbo uye ikozvino vanogona saka mune ramangwana pane mukana wakakura mavhiripu kukwirira ikoko kunogona kuve chinhu chinosanganisirwa kubatsira vanhu kusvika pazvinhu munzvimbo dzakakwirira. Kukwidza kwaizobatsira avo vasina munhu anovabatsira yose basa nguva dzose. Izvo zvaizoitawo kuvandudza shanduko kubva pakurara pamubhedha kuenda pane iyo wiricheya. Kukwidza kwaizoitawo kupa wheelchair vashandisi kugona kuenda pamusoro pemapodho, nzira dzemumigwagwa, kana zvipingaidzo zviri munzira yavo.